အလုပ်သမားအခွင့်အရေး ကြိုးပမ်းသူ အန်ဒီဟောကို ထိုင်းအစိုးရက ထောင်ဒဏ်ချမှတ်
မြန်မာများအပါအဝင် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ အနေဖြင့် အလုပ်သမားအခွင့်အရေးများ ရရှိစေရန် အန်ဒီဟောက ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပေးနေသည်
ဆုမြတ်မွန် နှင့် Frontier ရေးသားသည်။
Microsoft က မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဌာနေကိုယ်စားလှယ် ခန့်အပ်
အမေရိကန်နိုင်ငံမှ ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်သည့် Microsoft က မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဌာနေကိုယ်စားလှယ် ခန့်အပ်ခြင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအား အာရှပစိဖိတ်ဒေသရှိ ၎င်းတို့၏ ၁၈ ခုမြောက် ဈေးကွက်အဖြစ် ထည့်သွင်းလိုက်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် Sy Wann ကို ခန့်အပ်လိုက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို တိုးချဲ့လိုက်ပြီဟု စက်တင်ဘာ.
သံဃာတော်များ ဆန္ဒပြပွဲတွင် မပါဝင်စေရေး ဆောင်ရွက်မည်ကို ဦးဖြိုးမင်းသိန်း ထောက်ခံ
သံဃာတော်များအနေဖြင့် ဆန္ဒပြပွဲများတွင် မပါဝင်ကြရေးအတွက် ထိန်းသိမ်းသွားရေးအတွက် ဆွေးနွေးရန် စီစဉ်ထားမှုကြောင့် အားတက်မိသည်ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ယနေ့ပြောကြားသည်။
ဟိန်းကိုစိုး နှင့် Frontier ရေးသားသည်။
မုန်းဝန်းလူမျိုးနှင့် နိုင်ငံသားဖြစ်မှု ပြဿနာ
ယခင်အစိုးရက မန်ဒရင်း တရုတ်ဘာသာစကား ပြောဆိုသော လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ဗမာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခဲ့သဖြင့် ထိခိုက်လွယ်သော လူမျိုးရေး ပြဿနာရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အငြင်းပွားဖွယ်ရာများ ဖြစ်ခဲ့သည်။
ကျော်ဖုန်းကျော် ရေးသားသည်။ နိုင်ငံရေးလောကတွင် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကဲ့သို့ စီးပွားရေးလောကတွင် အရေးပါသော မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်၏ ရွေးကောက်ပွဲအား ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက်က ကျင်းပခဲ့ရာ လက်ရှိ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်မင်းဝင်းအား ဥက္က၏အဖြစ် ပြိုင်ဘက်မရှိ တင်မြှောက်ခဲ့ကြသည်။ ၎င်းသည် ကုန်သည်/စက်မှုအသင်းချုပ်တွင် ၁၉၉၀ ခုနှစ်က စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး.
ပွင့်လင်းမြင်သာမှု စစ်တမ်းတွင် တပ်မတော်ပိုင်လုပ်ငန်းများ ရလဒ်ဆိုးရွားနေဆဲ
တပ်မတော်ပိုင် ကုမ္ပဏီနှစ်ခုနှင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင် အခြားလုပ်ငန်းအချို့သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု စစ်တမ်းတွင် ရလဒ်များ ထပ်မံဆိုးရွားနေဆဲဖြစ်သည်ကို တွေ့ရသည်။ အမေရိကန်က စီးပွားရေးအရ ပိတ်ဆို့အရေးယူသည့် စာရင်းမှ မကြာမီ ကင်းလွတ်ဖွယ်ရှိသည့် လုပ်ငန်းအချို့မှာ စစ်တမ်းတွင် အဆိုးရွားဆုံး ရလဒ်များ ရရှိနေဆဲဖြစ်သည်ကို တွေ့ရသည်။ တတိယအကြိမ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏.
ကျောက်မဲရှိ စစ်ဖြစ်ရာ ဒေသတွင် ကျောင်းပြန်ဖွင့်သော်လည်း ကျောင်းသားအားလုံး မတက်နိုင်သေး
လက်ရှိအချိန်တွင် ကျောက်မဲမြို့ပေါ်၌ နေရပ်မပြန်သေးသဖြင့် ကျောင်းမတက်ရသေးသည့် ကျောင်းသား ၂၀၅ ဦးခန့် ကျန်ရှိနေသေးသည်။
စာသင်ခန်းထဲက အတိတ်ကို လျစ်လျူရှုခြင်း
အသက်မွေးနိုင်တဲ့ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း အားနည်းတဲ့အပြင် ဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှုတွေကြောင့် သမိုင်းဘာသာ လေ့လာမှုကို အကြီးအကျယ် ထိခိုက်စေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သမိုင်းဘာသာဟာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ပိုကောင်းတဲ့ အနာဂတ်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ရာမှာတော့ အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍက ပါဝင်နေဆဲပါ။
Rosalie Metro ရေးသားသည်။